Global Voices teny Malagasy » Panama: Firenena Amidy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jona 2012 9:18 GMT 1	 · Mpanoratra Ariel Moreno Nandika (en) i Georgi McCarthy, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Panamà, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka
[Ny rohy rehetra dia mitondra mankany aminà tranonkala miteny Anglisy raha tsy misy fanamarihana manokana.]
Amidy i Panama : na farafaharatsiny izay no fahitan'ny vondrona Panameana lehibe iray ny zava-misy taorian'ny nahitàny tamin-katezerana ny fomba ataon'ny governemantan'ny Filoha Ricardo Martinelli  ikendrena ny handafosana ampahany goavana amin'ireo fananan'ny firenena.
Ny fanjakan'i Panama no manana ny 49% amin'ny sehatry ny antso an-telefaona ao Panama; ny ampahany 49% iray hafa dia an'ny orinasa Britanika Cable & Wirelles ary ny 2% sisa dia an'ny mpiasan'ilay orinasa. Manana ampahany ihany koa ny fanjakana any amin'ireo orinasa mpamokatra herinaratra; kanefa, nanapa-kevitra ny hivarotra ny 24% amin'ny fampiasam-bolany amin'ireo orinasa roa ireo ny fanjakana. Naneho hevitra tamin-katezerana ny vahoaka tao Panama.
Milaza amintsika ny fomba fijeriny i Erick Simpson ao amin'ny bilaoginy Pma507Pty Panamá Blog :
Raha tsy hoe miresaka fivarotana noho ny fikatonana nateraky ny fatiantoka isika koa, ny governemanta amin'izao fotoana dia nanapaka samirery sy nanendry tena hivarotra izay mba hany sisa fananan'ny fanjakana any anatin'ireo orinasa iaraha-mitantana. Ho enti-manomboka azy, ireo ray amandreny mpiahy “omem-boninahitra” eto amin'ny firenena dia “nanao izay haha-ara-dalàna” tan-kiafinafina ny famarotana ny anjaran'ny fanjakana tamin'ireo orinasa fitsinjarana sy famokarana herinaratra, tany an-damosintsika, teo anaty haizina tanteraka. Ny Filankevitry ny Kabinetra koa dia nanome alàlana ny Minisitry ny Toekarena mba hanolotra fanovàn-dalàna iray eo anatrehan'ny Antenimieram-pirenena, izay nanova ny rafitry ny Ivontoeram-pirenena misahana ny Fifandraisan-davitra, miaraka amin'ny eritreritra hivarotana ny 49% amin'ny ‘capital social’ an'ny fanjakana ao amin'ny Cable & Wireless ary hametraka ny 25% amin'izay varotra izay ho ao amin'ny FAP, na Tahirim-bola ho an'i Panama, izay vao avy noforonina.
"Ry mpanao politika, raha tena te-hivarotra zavatra tokoa ianareo, maninona no tsy asiana garazy fivarotana ao an-tranonareo? Tsy amidy i Panama! Ampy izay…"
Tonga tamin'ny haavo ambony tokoa ny hatezerana satria na dia ireo antoko roa mpifandrirotra hatrizay teo amin'ny tantara aza dia niara-nanangana “mandatehezana ho an'ny demaokrasia” niraisany. Ny Antoko Revolisionera Demaokratika  [en] (PRD), natsangan'ny Jeneraly Omar Torrijos  [en], dia nanangana vovonana iray niarahany tamin'ny Antoko Panameñista  [en], natsangan'i Arnulfo Arias Madrid  [en], izay efa filohan'i Panama mandra-pisian'ny fanonganam-panjakana notarihan'i Torrijos sy ny Tafi-Bahoaka Panameana. Na izany aza, tamin'ny faran'ny herinandro dia niara-“nifoka ny pipan'ny fandriampahalemana” ireo antoko roa ireo ary nifanaiky ny hijoro hanohitra ny fikasan'ny governemanta amin'izao fotoana.
Ny Panameana sasany dia nifamory tamin'ny Alatsinainy 19 Jona 2012, teo anoloan'ny Antenimiera mpanao lalàna, toerana tokony niresahan'ireo mpahay lalàna ny mikasika ny famelàna na tsia ny hivarotana an'ireo anjaran'ny fanjakana ireo. Ny mpanotrona rehetra sy ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohitra dia azo lazaina ho nibodo avokoa io fotoam-pivoriana io, izay tsy maintsy nofoanana sy nahemotra ho ny 19 Jona. La Prensa  mitatitra hoe :
Hipoka ireo tranolay teo anoloan'ny antenimiera tamin'ity Alatsinainy ity. Tamin'ny 12:45 alina, nanomboka nihira ny hiram-pirenena ry zareo sady nanofahofa ny saina Panameana teny aminy.
Amin'ny lafiny iray, ireo mpanao lalàna avy amin'ny antoko mpanohitra dia nijoro sy naka toerana nanoloana ny sezan'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena, nitondra saina. Telo no fitambaran'ny isan'ireo saina nolanjaina, ka mpanao lalàna roa isaky ny saina iray no nilanja izany.
Ireo Panameana mpiondana aterineto koa dia naneho ny hatezeran-dry zareo ary noforonina ny tenifototra No Vendan Panamá  (“Aza Amidy i Panama”), ka tamin'izany no nanehoan'ireo Panameana an-jatony ny tsy hafaliany amin'ny fomba fitantanana ny fananam-panjakana.
Olana lalim-paka no hitan'i Ana Lorrein J (@analorrainej ) izay lasa lavitra noho ny resaka kilasy politika ary miantraika hatrany amin'ny fototry ny fiarahamonina Panameana mihitsy :
Tandindon'ny fiarahamonintsika ny kilasy politika, izay ny ‘AHY’ no olana voalohany ary samy mandeha samy mitady ny zavatra hafa ambiny rehetra…
Mangataka ny filoham-pirenena i Karen Chalmers (@karen_chalmers ) mba hisoroka ny fifandonana eo amin'ny samy Panameana :
Atoa Filoha, Mangataka aminao izahay, amin'ny anaranay manokana, ny zanakay, ary i Panama tsy foinay, mba hamerina handinika sy hisoroka ny fifandonana eo amin'ny samy Panameana.
Nifarana taminà diabe iny andro iny, niaraka taminà Panameana an'aliny nangataka ny governemanta hampiato ilay famarotana. La Prensa  no mamintina azy :
Kanefa, olona 1.500 eo no nanatevin-daharana ilay fenehoan-kery taty aoriana kely. Ny tanjona dia ny hanakana ny ankamaroan'ireo hetsika tato ho ato nataon'i Ricardo Martinelli, Filohan'ny Repoblika.
Voatondro hitohy ny 19 Jona ny fotoam-pivorian'ny Antenimiera. Mandritra izany, niandry hatrany ny hahita izay mety hitranga amin'ireo fanapahan'ity governemanta ity ny vahoaka tao Panama, vonona ny hanao izay handrenesana ny feony ao amin'ny aterineto sy eny an-dalambe mikasika izay ho vokany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/20/34495/
 Pma507Pty Panamá Blog: http://pma507pty.wordpress.com/2012/06/15/panama-en-liquidacion/
 Antoko Revolisionera Demaokratika: http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Revolutionary_Party
 Jeneraly Omar Torrijos: http://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Torrijos
 Antoko Panameñista: http://en.wikipedia.org/wiki/Paname%C3%B1ista_Party
 Arnulfo Arias Madrid: http://en.wikipedia.org/wiki/Arnulfo_Arias
 La Prensa: http://www.prensa.com/uhora/locales/publico-abarrota-las-gradas-cantan-el-himno-y-portan-banderas/101396?en
 No Vendan Panamá: https://twitter.com/#!/search/No%20vendan%20Panam%C3%A1
 La Prensa: http://www.prensa.com/uhora/locales/centenares-de-personas-marchan-por-la-democracia/101436